Axmed Madoobe: DFS duulaan ayey kusoo qaadday Jubbaland | KEYDMEDIA ONLINE
Axmed Madoobe: DFS duulaan ayey kusoo qaadday Jubbaland
Madoobe ayaa si kulul u weeraray DFS.
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo hadal ka jeediyey kulanka aragti wadaag ee maanta ka furmay Garoowe ayaa sheegay in dowladda dhexe ay duulaan kusoo qaadday maamulkiisa bedalkii ay Al-sabaab la dagaallami lahayd.
Isaga oo ka hadlayey arrinta doorashada wuxuu sheegay in dowldda uu hoggaamiyo Farmaajo ay dooneyso in ay ka maroogsato maamulkiisa gobolka Gedo, islamarkaana halkaasi ay ku qabato doorasho aanay Jubbaland la socon.
Dhinaca kale, Axmed Madobe ayaa sheegay in DFS ay ciidankii qaranka ay kusoo daabushay gobolka Gedo, islamarkaana dagaalkii uu maamulkiisa kula jiray A-shabaab mid kale loogu soo daray.
Axmed Madoobe oo sidoo kale ka hadlay arrinta ku aaddan waxa ka ira in uu difaac u yahay Kenya ayaa tilmaamay in isagu uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa jooga islamarkaana aanu difaac u ahayn Kenya.
Ugu dambeyn, Axmed Madoobe ayaa sheegay in DFS looga baahan yahay iney maamulkiisa u madax-banaaneyso gobolka Gedo si doorasho loogu qabto.